Ahoana ny fomba hanaovana volo matevina kokoa - Dia Singam-Bolo
Gynaec Dia Singam-Bolo Asa Sy Vola Amboary Eo Noho Eo Anontanio The Expert Manjamaso Celeb Look Boky Mpahay Nahatratra Lakozia Maharitra
Ahoana ny fomba hanaovana volo matevina kokoa
Moa ve ianao mandeha mandingana olona manana volo marevaka ary maniry hanana volo toa azy ireo? Matokia anay fa tsy irery ianao. Ny zavatra iray tadiavin'ny vehivavy rehetra eto an-tany dia ny volo miloko, mamirapiratra ary mamirapiratra. Fa maninona no tsy, fa ho selfie tsara tsy misy lalao volo tsara kokoa? Amin'ny 'fiteny volo', ny volo tsara dia mitovy amin'ny volo matevina sy matanjaka ary tresses mamirapiratra voajanahary.
Raha toa ianao ka manana volo manify, toy ny kofehy, fantaro fotsiny fa tsy inona izany fa very ny volonao (fantaro ny tianay holazaina ?!). Vehivavy maherin'ny 50 isan-jato miady amin'ny alahelo amin'ny volo mora volo ary miafara amin'ny tolona mandritra ny taona maro hahazoana volo tsara sy matevina. Raha mangetaheta hidy matevina ianao dia vakio mialoha ary fantaro izay rehetra hanampy anao hampitombo ny fitomboan'ny volo sy ny hareny.
1. Inona no dikan'ny volo matevina?
roa. Ahoana no hahalalana raha manana volo mahia ianao na volo matevina?
3. Fa maninona no manana volo mahia?
Efatra. Mayonnaise + Sarontava atody hahatratra volo matevina
5. Avocado + Saron'akondro Mba hahatratrarana volo matevina
6. Ranon-tongolo ho an'ny volo marevaka
7. Inona no hohanina hampitomboana ny fitomboan'ny volo?
8. Menaka ampiasaina amin'ny volo matevina
9. Ahoana no hikarakarana ny volo matevina?
10. FAQ Amin'ny volo matevina
Inona no dikan'ny volo matevina?
Raha mijery ny vahaolana amin'ny fanamafisana ny volonao ianao dia zava-dehibe ny mahatakatra ny dikan'ny hoe manana volo matevina. Ny zavatra voalohany aloha, ny volo maditra dia tsy midika hoe volo matevina! Ny volo maditra sy volo matevina dia matetika no diso hevitra fa iray. Ny voalohany dia mifandraika amin'ny hatevin'ny kofehin'ny volo, fa ny faharoa kosa misy ifandraisany amin'ny hakitroky ny volo.
Manomboka mitombo ny volo eo amin'ny farany ambanin'ny volon'ny volo, noho izany ny hatevin'ny volonao dia voafaritra ihany koa amin'ny isan'ny follicle volo. Noho izany, ny hatevin'ny volonao dia tsy mamaritra ny hatevin'ny kofehin'ny volonao, fa ny isan'ny kofehin'ny volonao.
Ahoana no hahalalana raha manana volo mahia ianao na volo matevina?
Ny fizahana raha manana volo matevina ianao na tsia, dia tsy misy siansa balafomanga. Tsotra! Raha manana volo fohy ianao, dia tadiavo ny tampon-dohanao raha tsy manao fizarazarana. Raha afaka mahita ireo paty ireo ianao, dia ambany ny volo. Raha lava volo ianao, manaova ponytail ary refeso ny refin'ny boriborinao. Raha latsaky ny roa santimetatra ny refy dia manana volo manify ianao / ambany ny hatevin'ny volonao. Raha eo anelanelan'ny 2-3 santimetatra dia manana habe antonony ny volonao. Ny hakitroky avo dia rehefa mihoatra ny 3 santimetatra ny manodidina ny rambony. Fotoana hamoahana ny kasetyo ary handrefesanao izao!
lalao tsara indrindra ho an'ny vehivavy virgo
Fa maninona no manana volo mahia?
Raha olona ambany volo ianao, dia zava-dehibe ho anao ny hahafantatra ny antony ao ambadik'izany. Voatanisa eo ambany ny antony mety mahatonga ny volo manify, tadiavo ny anao!
Génétique: Ny toetran'ny vatana sasany dia azo avy amin'ny ray aman-dreninao. Raha ny volo ambany hakitroky no tao amin'ny ambaratongam-pitondranao dia mety tsy misy lalan-kivoahana ho anao. Na izany aza, azonao atao ny manandrana ny vintanao mandrakariva ary manandrana fanafody vitsivitsy omena etsy ambany.
Sakafo tsy salama: Marina ny voalaza hoe: 'ianao no mihinana.' Ny fitomboan'ny volo dia misy fiatraikany lehibe amin'ny sakafo laninao . Ny sakafonao dia tsy maintsy ahitana vitamina, mineraly ary otrikaina hafa ilaina. Ka raha manelingelina anao ny volo ambany, dia azonao atao ny mandeha mijery ilay zavatra nohaninao nandritra ny sakafo antoandro!
Simika mavesatra sy fitaovan'ny volo: Ny vokatra volo izay ampiasainao hitantanana sy tandremo ny volonao tonga miaraka amin'ny baoty. Ny akora simika manimba misy amin'ireto vokatra ireto dia matetika masiaka amin'ny volonao ka miteraka volo sy vaky. Ny masinina mahitsy izay ampiasainao matetika, dia mahatonga ny volonao ho mora volo ary mora simba. Ka na eo am-piezahanao hanana volo tsy misy tomika ianao dia manampy tsikelikely ny fahasimban'ny volo.
Ny volo ambany dia ambany koa ateraky ny Fahanterana, fiovana hormonina, toe-pahasalamana Sns
Mayonnaise + Sarontava atody hahatratra volo matevina
Miaraka amin'ireo sakafo ilaina amin'ny sakafo ilaina amin'ny lovia marobe, ny mayonnaise sy ny atody dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitomboan'ny volonao satria samy manan-karena proteinina izy roa. Ity no fomba ahafahanao mampiasa azy ireo hahazoana volo matevina sy marefo!
Manaova paty amin'ny fampifangaroana ny mayonnaise sy ny atody.
Apetaho amin'ny volonao ity paty ity ary avelao mandritra ny 25-30 minitra ary sasao avy eo.
Ampiasao isan-kerinandro ity sarontava ity raha hijery vokatra haingana.
Avocado + Saron'akondro Mba hahatratrarana volo matevina
Manankarena vitamina E, ny avocado dia manampy mandina ny volonao ary mampitombo azy. Ny potasioma, menaka voajanahary, gliosida ary vitamina ao manampy ny akondro manalefaka sy miaro ny volonao tsy ho tapaka. Ampiasao amin'ny volo ireo singa roa ireo dia jereo ny vokatra mahafinaritra!
fanazaran-tena ao an-trano mba hampihenana ny tavy kibo
Afangaro miaraka ny zavokà masaka iray lehibe ary akondro kely masaka iray.
Manampia menaka oliva iray sy menaka mikraoba iray sotro fihinana iray ao amin'io menaka io.
Araho moramora ao anaty volonao manarona ny faka sy ny toro-hevitra ity fangaro ity. Rehefa afaka 30 minitra dia kobanina amin'ny rano mangatsiaka sy shampoo.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra, ampiasao ity sarontava ity in-droa isan-kerinandro.
Ranon-tongolo ho an'ny volo marevaka
Ity akora ity izay mora hita isaky ny lakozia rehetra, dia mahasoa indrindra amin'ny volonao. Ny tongolo dia manana atiny solifara betsaka izay manentana ny folikelina fitomboan'ny volo tsara kokoa . Izy io koa dia manampy amin'ny fahazoana volo tsara kokoa amin'ny famelomana ireo kofehin'ny volonao. Ity misy fomba mety hahatonga ny tongolobe ho mpiorina anao rehefa mampiroborobo ny volo.
Voaso ny tongolo iray ary tetehina kely.
Manampia rano amin'ireto sombin-kazo ireto avy eo afangaro.
Esory ao anaty vilia iray ity paty ity.
Mampiasà landihazo landihazo hametahana an'io paty io amin'ny loha.
Avelao izy mandritra ny 10 minitra ary avy eo sasao ny volonao amin'ny shampooing sy conditioner ary jereo ny vokany!
Inona no hohanina hampitomboana ny fitomboan'ny volo?
Toy ny vatanao mahazo angovo avy amin'ny sakafo izay nohaninao , ny volonao dia mahazo otrikaina amin'ny sakafo koa. Noho izany, raha maniry hampitombo ny volo ianao dia zava-dehibe ny hihinananao tsara. Ireto misy sakafo mahavelona ilain'ny volonao sy sakafo vitsivitsy azonao hanina hahazoana ireo otrikaina ireo:
Proteinina: atody, legume, voa, trondro, vokatra vita amin'ny ronono, sns.
Vitamina E. : Almond, Voanjo, legioma maintso, sns.
Vitamina A: karaoty, voatavo, ovy mamy, vokatra biby sns.
Vitamina C: Blueberry, Guava, Blackcurrant, Brocoli, voasary sns.
Vy: voasarimakirana, epinara, brocoli, hena mena, trondro, sns.
Menaka ampiasaina amin'ny volo matevina
Ny menaka vitsivitsy dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny volo fa manampy amin'ny fanalefahana ny famirapiratana, ny malama ary ny fahasalaman'ny volo amin'ny ankapobeny. Ny fanosorana ny volonao tsy tapaka dia mety hanampy amin'ny ady amin'ny olana toy ny fizarana sy ny dandruff ankoatry ny zavatra hafa. Ireto misy a menaka tena ilaina vitsivitsy azonao ampiasaina hanamafisana ny fitomboan'ny volo :
Menaka voanio: manan-karena vitamina E, ny menaka voanio dia mampiroborobo ny volo ary mamela ny volonao ho salama, malefaka ary marevaka.
Menaka lavender: fantatra hanamaivanana ny fihenjanana, ny menaka lavender dia manampy amin'ny fanatsarana ny fitomboan'ny volo avy hatrany amin'ny folikelika.
Menaka Argan: Fantatra amin'ny fitsaboana ny sisiny misaraka, ny menaka argan dia miaro ny folon'ny volo amin'ny fahasimban'ny hafanana sy taratra ultraviolet.
Menaka almond: manisy tombo-kase amin'ny hamandoana ny menaka almond ary miaro amin'ny fahaverezan'ny volo sy ny vakivaky. Iray amin'ireo menaka tsara indrindra izy io fitomboan'ny volo haingana .
Menaka ilaina hafa izay manampy amin'ny fampitomboana ny fitomboan'ny volo dia:
Menaka Jojoba, menaka oliva, menaka voaloboka, menaka veromanitra, menaka sesame, menaka hazo dite, menaka Castor ary menaka Rosemary.
Ahoana no hikarakarana ny volo matevina?
Raha efa voatahy volo matevina ianao dia zava-dehibe ny fitantanana sy ny fikolokoloana tsara ny volonao. Ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao:
vady tsara tarehy sarimihetsika Koreana
Misotroa rano betsaka, tazomy hidina ny volonao.
Hamarino tsara fa mampiasa shampooing sy conditioner ianao izay mety indrindra amin'ny volonao.
Alohan'ny hanasana ny volo rehetra, hosory moramora ny hodi-dohanao.
Ny volonao no malemy indrindra rehefa mando izy, koa alao antoka fa tsy manosotra mafy ny volonao lena ianao. Paka maina.
Aza atao matetika ny mampiasa fitaovana fanaovana taovolo.
Aza atao soavaly soavaly.
Aza misasa be loatra.
Aza atao fitsaboana simika toy ny fanitsiana / famolavolana sns.
Hamarino tsara fa tsy tapaka ny torimasanao. Manampy amin'ny fisorohana ny adin-tsaina izay mitarika ny fianjeran'ny volo.
FAQ Amin'ny volo matevina
P. Inona no hohanina hahazoana volo matevina voajanahary?
TO. Ny volo dia vita amin'ny proteinina, ka tena ilaina ny manome proteinina ampy ho an'ny volonao. Ny fihinanana sakafo manankarena amin'ny proteinina toy ny atody, trondro, vokatra vita amin'ny ronono, akoho amam-borona sns, dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny volonao. Ny otrikaina hafa takiana amin'ny volonao toy ny vy, vitamina A, C ary E, dia azo alaina amin'ny fihinanana voanjo, legioma maintso, trondro hena mena sns. Mety hanampy ihany koa ny voankazo toy ny voasary, karaoty, zezika sns.
Q. Tokony hampiasa serum na crème ve aho amin'ny voloko maina sy mahia ary malefaka?
TO. Raha manana volo mikarepoka na olioly ianao, izay matetika iharan'ny frizz, dia mety hampiasa vola amin'ny haircare kokoa ianao noho ny hafa. Ho an'ireo manana volo tena mahitsy sy silky, ny fanosotra serum na crème d'étition aorian'ny famelana dia afaka manatsara ny fahasalaman'ny volo.
Q. Impiry aho no tokony hanosotra ny voloko?
TO. Ny fotoam-pianarantsika dia nahita fotoam-pitrandrahana menaka mandritra ny alina, ary avy eo niditra an-torimaso mamy izahay nefa tsy fantatsika ny vokany avy eo. Raha voahosotra mandritra ny ora maro ny volonao dia mazàna manangona loto izay manelanelana ny menaka voajanaharinao ny loha. Tsy mila an'izany isika izao, sa tsy izany?
Vakio ihany koa: Sarontava volo namboarina ho an'ny fitomboan'ny volo & ho an'ny volo maina, simba, marefo
Sokajy Fampihenan-Danja #actagainstabuse Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika
tsakitsaky mora atao
ny fomba hampiatoana ny fitomboan'ny volo amin'ny saoka
karazana yogasana miaraka amin'ny sary
fototra tsara indrindra ho an'ny hoditra mitambatra
Sophie turner tahaka an'i jean grey
ny fomba hisorohana ny dandruff sy ny volo